I-Redmi K20 iza kufika nge-586 MP ye-Sony IMX48 sensor | I-Androidsis
Iakhawunti esemthethweni yeRedmi Weibo iqinisekisile ukuba iflegi yayo yokuqala, eya kuba yiyo Redmi K20, uza kuza naye Isenzi sensor seSony 586 MP Sony IMX48.
Ngelixa inzwa ikhoyo kwiifowuni ezininzi eziphakathi kunye neziphezulu ezikhululwe kulo nyaka, iiparameter ezinje ngobungakanani bokuvulwa, ukulungiswa kwemifanekiso, kunye nezinye izinto zesoftware ezahlulahlula phakathi kwazo., Y i-K20 ayisayi kuqatshelwa licandelo layo lokufota.
Isixhobo siya kuba nokuseta kwekhamera kathathu, kodwa kuphela isikhombisi senzwa esisisiseko esatyhilwayo. Siyathemba ukuba ifowuni ikwanekhamera ebanzi ye-engile kunye nefowuni okanye isivamvo sobunzulu njengekhamera yesithathu.
Ukongeza ekuqinisekiseni eyona khamera iphambili, umphathi weRedmi uLu Weibing utyhile kwesinye isikhundla ukuba ifowuni iya kuxhasa i-960fps yokurekhoda kokuhamba kancinci. Eli linqaku lokuba Siyi9, Ke kulungile ukuba uyazi ukuba izakufumaneka nakwexabiso eliphantsi leRedmi. Nangona kunjalo, eyona nto siyithembileyo, okanye eyona nto siyinqwenelayo, nyani, kukuba iRedmi K20 Pro inayo uzinzo lomfanekiso oqaqambileyo iMi 9 eyeqa ngokumangalisayo.
Izolo, I-Redmi K20 iqinisekisile ukuba ne-self-camera ye-pop-up. Kuye kwaqinisekiswa ukuba kuza neprosesa Snapdragon 855. Siziva ngathi i-teaser elandelayo iya kuba malunga namagubu.
Ngokumalunga nolunye ulwazi, kuye kwakho intetho ye-19.5: 9 yesilinganiselo somlinganiso wesikrini, esiya kuba sisayizi enkulu, nangona iya kubanjwa lelinye icala elimxinwa, imiphetho ephezulu nesezantsi. Nokuba yeyiphi na, esi sixhobo silandelayo siyakumangalisa ngazo zonke izinto ezinazo, kodwa ikakhulu ngenxa yexabiso laso, eliza kwaziwa.
(Imithombo: 1 y 2)
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » I-MP ye-586 ye-Sony IMX48 iya kuba ngumlingiswa ophambili kwimodyuli yemifanekiso engasemva yeRedmi K20